Ahoana no hanatsarana ny vokatro voapetrako amin'ny Amazon noho ny varotra ambony?
Raha ny fahombiazan'ny fitantanana ny orinasam-pifamoivoizana malaza amin'ny alàlan'ny tranokala ecommerce malaza, ny fananana lisitry ny vokatra tsara dia tsara indrindra izay mahatonga ny tolotra omenao any amin'ny mpikaroka any. Ny vokatranao amin'ny Amazon dia tsy fanilikilihana amin'ity lalàna ity. Ary etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba fiatrehana ny SEO fanatsaràna araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny toro-lalana tsikelikely.
Ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny lisitra amin'ny Amazon
Alohan'ny zavatra hafa, avelao hiatrika izany - toy ny amin'ny tranga mitranga amin'ny SEO, fomba amam-panao fitadiavam-bola (SEO) manomboka amin'ny fikarohana fikarohana lalindalina lalindalina kokoa. Ary manome toro-hevitra eto aho amin'ny fanombohana kickstart amin'ny Google's Keyword Planner Tool. Amin'izany fomba izany, dia hahita sary lehibe momba ny sokajy misy anao ianao na ny tsenan'ny varotra, ary koa ny teny fototra sy teny lava lava ampiasain'ireo mpividy mivantana, tsy hoe Amazon fotsiny ihany fa angamba izay rehetra mikaroka amin'ny môtô karoka Google manerana izao tontolo izao . Avy eo dia tonga ny fijerinao ny sokajinao manokana mifandraika amin'ny vokatra lisitra SEO amin'ny Amazon. Manoro hevitra aho mba hampiasa ny iray amin'ireto fikarohana sy fikarohana momba ny soso-kevitra manaraka ireto, toy ny AMZ Tracker, Scope, Words Trader, na mpahay siansa. Aza misalasala manapa-kevitra ny iray amin'ireo safidy etsy ambony, satria ny fitaovana rehetra dia manana karazana asa tena azo ampiharina hanampiana anao amin'ny fomba fanao mahazatra.
Basic Optimization SEO for Your Listing on Amazon
Here is how you can quickly optimize your listings to meet your goal goal - to gain prominence in search Amazon ho an'ny teny amidy amin'ny teny fanalahidy manan-danja. Ary tokony hifantoka indrindra amin'ireo fizarana fototra ao amin'ny lisitrao ianao: Product Title, Lisitry ny Bullet Points, ary Item Description. Eto ambany eto ny fanazavana fohy ho an'ny tsirairay.
Ny lohateny lehibe indrindra amin'ny lisitra vokarinao momba an'i Amazonia dia ny toerana tokony hanaovanao teny fanalahidy maro sy ny fehezanteny fohifohy ampiasaina araka izay azo atao. Mariho anefa, fa tsy tokony ho oviana na oviana ianao amin'ny fananana teny fanalahidy be loatra izay niparitaka teo. Mazava ho azy, raha tsy tianao ny hanaiky ny fihetsikao ho toy ny spammy na ezaky ny fanodikodinam-panafahana izay mety hampiharina amin'ny demokrasia (tranga ratsy indrindra)..Diniho àry ireto soso-kevitra manaraka ireto mba ahafahanao manokatra ny lohanao SEO - tsara kokoa amin'ny fomba tsara indrindra:
Ny lohateny dia asaina hijanona ao anatin'ny 200 ary tsy misy tarehimarika lava intsony.
Ny taratasy voalohany amin'ny lohateny tsirairay dia tokony halaina.
Ireo tarehimarika nosoratana tamin'ny tarehimarika dia avela ho an'ny anaram-boninahitra vokatra (oh., Valo fa tsy 8).
Aza ampidinina ny habe na ny loko, mazava ho azy, raha tsy fananana tena manan-danja.
Lisitry ny Bullet Points
Ny toetra mampiavaka ny singa dia tokony ho madio sy mazava araka izay azo atao.
Manoritsoritra ny toetra mampiavaka ny vokatra sy ireo singa tena mampiavaka azy isan'andro.
Manasongadina ireo singa fototra sy tombon-tsoan'ilay singa.
Ny zavatra hafa rehetra tokony hatao aseho ao anaty boaty.
Ny fampahalalana rehetra momba ny vokatra dia tokony hodina tsy misy fanilihana.
Ny teboka voalohany amin'ny fahasahiranan'ny mpanjifa dia tokony hofenoina tanteraka.
Ny famaritana ny vokatra dia tokony atao tsara kokoa ho an'ny teny fanalahidy lava, ary ny fangataham-kaonty LSI miaraka amin'ny antonony mifanaraka amin'ny sokajy na ny nosy.
Ny endritsoratra tsy manam-paharoa sy tany am-piandohana izay manoratra momba ireo singa tena lehibe amin'ny vokatra dia MUST Source .